Usoro nke abụọ ndị na-eme nchọpụta nwere ike iji ya na data ndekọ na- ekwu . Iche echiche maka ọdịnihu bụ ihe siri ike, ma eleghị anya n'ihi nke a, ịkọwa abụghị ugbu a bụ akụkụ dị ukwuu nke nchọpụta mmadụ (ọ bụ ezie na ọ bụ akụkụ dị ntakịrị na nke dị mkpa nke demography, economics, epidemiology and science politics). Ebe a, Otú ọ dị, m ga-amasị-elekwasị anya na a pụrụ iche nke ịkọ akpọ nowcasting -bụ okwu ewepụtara na ijikọta "ugbu a" na "ịkọ." Kama ịkọ ọdịnihu, nowcasting mgbalị iji echiche site ịkọ tụọ ugbu a ala nke ụwa; ọ na-anwa "ịkọ ọdịnihu" (Choi and Varian 2012) . Ntughari nwere ikike nke bara uru nye gọọmentị na ụlọ ọrụ ndị chọrọ usoro oge na ihe ziri ezi nke ụwa.
Otu ebe ebe ọ dị mkpa iji nweta oge kwesịrị ekwesị na nke ziri ezi bụ nke doro anya bụ ọrịa ntiwapụ. Tụlee ihe banyere influenza ("flu"). Kwa afọ, ntiwapụ nke ọrịa na-egbu oge na-akpata ọtụtụ nde ọrịa na ọtụtụ narị puku mmadụ nwụrụ gburugburu ụwa. Ọzọkwa, n'afọ ọ bụla, enwere ike inwe ụdị mmịnye dị iche iche nwere ike ịpụta na-egbu ọtụtụ nde mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, ntiwapụ influenza na 1918, a na-eme atụmatụ igbu mmadụ 50 na 100 nde (Morens and Fauci 2007) . N'ihi mkpa ọ dị iji soro ma nwee ike ịzaghachi na ntiwapụ nke influenza, gọọmentị dị gburugburu ụwa kere usoro nyocha nke influenza. Dịka ọmụmaatụ, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na United States (CDC) na-enweta ihe ọmụma site na ndị ọkachamara ahọpụtara nke ọma na gburugburu mba ahụ. Ọ bụ ezie na usoro a na-arụpụta data dị elu, ọ nwere ụkọ akuko. Nke ahụ bụ, n'ihi oge ọ na-ewe maka nbịakọta data site na ndị dọkịta ka a kpochaa, gbanwee, ma bipụtara, usoro CDC na-ahapụ atụmatụ nke ọnụọgụ flu dị izu abụọ gara aga. Mana, mgbe ị na-emezi ihe na-efe efe, ndị ọrụ ahụike ọha na eze achọghị ịma ụdị influenza dị izu abụọ gara aga; ha choro imata otua influenza nwere ugbua.
N'otu oge ahụ na CDC na-anakọta data iji mee ka ndị na-emetụta influenza, Google na-anakọtakwa data gbasara ọrịa influenza, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị dị iche. Ndị si gburugburu ụwa na-ezigara ajụjụ na Google mgbe niile, na ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị a-dịka "ọgwụ mgbapụta" na "mgbaàmà flu" -ọbụrụ na-egosi na onye na-aza ajụjụ ahụ nwere ọrịa. Mana, iji nyocha ọchụchọ ndị a iji chọpụta ịba ụba nke flu bụ ihe dị njọ: ọ bụghị onye ọ bụla nwere flu na - eme nchọpụta metụtara ọrịa, ọ bụghị ọnụọgụ ọchụchọ ọ bụla sitere n'aka onye nwere ọrịa ahụ.
Jeremy Ginsberg na otu ndị ọrụ (2009) , ụfọdụ na Google na ụfọdụ na CDC, nwere echiche dị mkpa ma dị nkọ iji jikọta isi mmalite data abụọ a. N'ụzọ dị nkpa, site na ụdị ụdị ihe omimi, ndị na-eme nchọpụta jikọtara data ọchụchọ ngwa ngwa na ngwa ngwa na data CDC ngwa ngwa na nke ziri ezi iji mepụta ngwa ngwa na nke ziri ezi nke mmịnye nke influenza. Ụzọ ọzọ ị ga-esi chee banyere ya bụ na ha jiri akara ọchụchọ iji mee ka data CDC dị ngwa.
Karịa kpọmkwem, iji data site na 2003 ruo 2007, Ginsberg na ndị ọrụ ibe gị mere atụmatụ mmekọrịta dị n'etiti mmịba nke influenza na data CDC na nyocha ọchụchọ maka nde 50. Site na usoro a, bụ nke a na-achụsasị data kpamkpam ma achọghị ihe ọmụma ahụike pụrụ iche, ndị nchọpụta ahụ chọtara otu ajụjụ 45 dị iche iche nke yiri ka ọ bụ ihe kachasị njọ maka data CDC. Mgbe ahụ, site na iji mmekọrịta ha mụtara site na data 2003-2007, Ginsberg na ndị ọrụ ibe nwalere ihe nlereanya ha n'oge oge influenza 2007-2008. Ha chọpụtara na usoro ha nwere ike ịba uru ugbu a ma bụrụ nke ziri ezi (nọmba 2.6). E bipụtara nsonaazụ ndị a na Nature na natara akwụkwọ mgbasa ozi. Ọrụ a-nke a na-akpọ Google Flu Trends-ghọrọ ihe atụ ugboro ugboro banyere ike nke nnukwu data iji gbanwee ụwa.
Figure 2.6: Jeremy Ginsberg na ndị ọrụ ibe ya (2009) jikọtara data ọchụchọ Google na data CDC iji mee ka Google Flu Trends, bụ nke nwere ike iwepụ ọnụego ọrịa ọrịa (ILI). Nsonaazụ na ọnụ ọgụgụ a bụ maka etiti Atlantic nke United States na oge nke afọ influenza 2007-2008. Ọ bụ ezie na ọ bụ na mbụ na-ekwe nkwa, arụmọrụ nke Google Flu Trends decayed over time (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013; Lazer et al. 2014) . E si na Ginsberg et al. (2009) , isi nke 3.
Otú ọ dị, nke a pụtara na ihe ịga nke ọma na-emesị ghọọ ihere. Ka oge na-aga, ndị na-eme nchọpụta chọpụtara ihe abụọ dị mkpa na-eme ka Google Flu Trends na-adọrọ mmasị karịa ya. Nke mbụ, omume Google Flu Trends bụ n'ezie nke ka mma karịa ụdị nke dị mfe nke na-atụle ọnụọgụ flu na-adabere na mpempe akwụkwọ mịpụtara site na nchịkọta abụọ kachasị ọhụrụ nke mgbasa ozi flu (Goel et al. 2010) . Ma, n'elu oge ụfọdụ, Google Flu Trends bụ n'ezie njọ karịa nke a dị mfe obibia (Lazer et al. 2014) . N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Ọdịdị Ụgwọ Google na ihe ọmụma ya nile, nkuzi igwe, na njikwa ike dị iche iche emeghị ka ọ pụta ìhè n'ụzọ dị mfe ma dị mfe nghọta. Nke a na-egosi na mgbe ị na-atụle amụma ọ bụla ma ọ bụ ugbu a, ọ dị mkpa iji tụnyere nchịkwa.
Nke abụọ dị mkpa caveat banyere Google Flu Trends bụ na ya nwere ikike ikwu ihe CDC flu data na-ewekarị mkpụmkpụ-okwu odida na ogologo okwu ire ere n'ihi nwayọọ na algorithmic confounding. Dịka ọmụmaatụ, n'oge Ọkụ Swine 2009 na ntiwapụ nke Google Flu Trends n'ụzọ dị ịrịba ama, ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke influenza dị elu, ma eleghị anya n'ihi na ndị mmadụ na-agbanwe agbanwe omume ha na nzaghachi maka egwu zuru oke nke ọrịa zuru ụwa ọnụ (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013) . Na mgbakwunye na nsogbu ndị a dị mkpirikpi, arụmọrụ nke nta nke nta gbanwere n'oge. Ịchọpụta ihe kpatara ihe nkedo a dị ogologo bụ ihe siri ike n'ihi na algorithms Google chọtara ihe dị mma, ma ọ na-egosi na na 2011 Google malitere na-atụ aro okwu ọchụchọ metụtara ya mgbe ndị mmadụ na-achọ mgbaàmà flu dị ka "ọkụ" na "ụkwara" (ọ dịkwa ka njirimara a anaghịzi arụ ọrụ). Ịgbakwunye atụmatụ a bụ ihe dị oke mma iji mee ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ engine, ma mgbanwe algorithmic a nwere mmetụta nke ịmịnyekwu ọchụchọ ndị metụtara ahụike bụ nke mere ka Google Glu Trends na-eme ka mmerụ dị elu (Lazer et al. 2014) .
Ebe nchekwa abụọ a na-eme ka mgbalị ndị na-eme ugbu a na-agba ọsọ, mana ha anaghị egbu ha. N'ezie, site na iji usoro nlezianya mee ihe, Lazer et al. (2014) na Yang, Santillana, and Kou (2015) nwere ike izere nsogbu abụọ a. N'ịga n'ihu, ana m atụ anya ka ịchụpụ ihe ọmụmụ nke jikọtara nnukwu data data na onye nchọpụta-data anakọtara ga-enyere ụlọ ọrụ na gọọmenti aka ịmepụta oge ndị ọzọ na nke ziri ezi site na iji ọsọ na-agba ọsọ ọ bụla a na-eme ugboro ugboro na oge ụfọdụ. Nbudata oru ngo dị ka Google Flu Trends na-egosikwa ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na e jikọtara nnukwu ihe ọmụma data yana data ọdịnala e kere maka nzube nke nnyocha. N'ịtụgharị uche n'ihe atụ nke nkà nke isi nke 1, ugbu a ị nwere ike ijikọta ụdị njikere ejiji nke Duchamp na omenala Michelangelo iji mee ka ndị na-eme mkpebi nwee oge kwesịrị ekwesị na ihe ziri ezi nke ugbu a na amụma banyere ọdịnihu dị nso.